Sergio Busquets Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Sergio Busquets Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of Football Genius onye kasị mara aha; "El Pulpo". Okwu anyị bụ Sergio Busquets Child Story plus Ịkọwapụta Ihe Akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ OFF-Pitch facts (amaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere Style nke Play na FC Barcelona. Otú ọ dị, nanị ole na ole na-atụle Sergio Busquet's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Sergio Busquets nwa akụkọ akụkọ na -Ndụ Ezigbo Oge
A mụrụ Sergio Busquets Burgos na 16th ụbọchị nke July 1988 na nne ya, Loli Burgos na nna, Carles Busquets, ma nke dị n'okpuru foto nke Sergio Busquets Family Photo.
A mụrụ Sergio na ọgbọ nke abụọ na-agbasa agbụrụ. Ọ tolitere na Sabadell obodo Barcelona mgbe ya na nwanne ya nwoke bụ Aitor Busquets na-egwu egwu (nke e sere na ya n'okpuru) n'oge ha bụ nwata.
Nna ya, Carles, bụkwa ndị na-agba ọsọ, onye bụbu onye mgbaru ọsọ nke Barcelona bụ onye nọrọ n'ụlọ klọb ruo ọtụtụ afọ n'oge 1900, ọ bụ ezie na a na-ejikarị ya eme ihe. Sergio kpebiri ịghọ ndị na-agbado ụkwụ ekele maka nna ya bụ onye na-achọ ka nwa ya nwoke na-agbaso nzọụkwụ ya mgbe nile. N'okpuru ebe a, mkpebi o kpebisiri ike ịghọ nna ya abụghị ihe efu.
Iguzosi Ike n'Ihe Na-adị na Family Sergio Busquets: Nna ya, Carles Busquets bụ onye na-eguzosi ike n'ihe na-eche nche na-ejiri ya mee ihe dịka nhọrọ nke abụọ n'oge ya na FC Barcelona. Mgbe a kwusịrị na ọ bụrụ na ndị isi asọmpi egwuregwu mbụ na Barca na-asọpụrụ ya, Charles hụrụ na nwa ya nwoke, Sergio malitere ọrụ ya na ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ na-eto eto. Ebumnuche bụ iji hụ na Sergio anaghị enwe obere mpi na ebili n'elu.
Sergio Busquets nwa akụkọ akụkọ na -Nchịkọta Ọrụ
Mgbe ọ bụ nanị 7 n'afọ 1995, Busquets malitere njem bọl na Badia. Mgbe ọ nọsịrị oge, ọ kwagara na CEF Barberà Andalucía na 1996 ma nọrọ ebe ahụ ruo afọ atọ. Sergio ahụ sonyere na ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ nke EU Lleida na 1999 n'ihi ya mkpebi nna nke iwe ahapụ FC Barcelona.
Onye Sergio Busquets Na - Sergio biara na Lleida football academy maka ihe omumu nke nna ya, Carles, onye iwe were Louis van Gaal (bụ onye isi na FC Barcelona) onye nwere ndidi na ya, si otú ahụ na-amanye ya ka ọ hapụ Barça ịbanye maka Lleida.
Ọ dị mkpa iji mara na Jose Mourinho dị n'okpuru ebe a) bụ onye nnyemaaka nke FC FC mgbe Carles hapụrụ.
Carles Busquets ji obi uto soro ezinụlọ ya nile bu ndi Sergio, onye ghapuru isi n'ulo ndi ntorobia ya, Uni Esportiva Barberà ka o soro Lleida ebe o were afo ato. Sergio Busquets dị elu karịa ndị ntorobịa niile, ghọọ onye na-eto eto kachasị mma nke ọgbọ ya mgbe ọ dị afọ iri na ụma ka ọ na-edu ndị otu ya ka ha merie nnukwu ihe egwuregwu.
Mgbe nna ya lara ezumike nká na Lleida na 2002, Sergio Busquets chere na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eche na ọ dịghị ihe ọ bụla ọzọ ị ga-alụ maka ya, n'ihi ya, ọ dị mkpa ka ọ kwaga n'ugwu ndị ntorobịa. O nyere ya aka na Jàbac Terrassa n'akụkụ 2003 ma nọrọ afọ abụọ ọzọ na agụmakwụkwọ tupu ya agụ na FC Barcelona football academy, La Masia. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Sergio Busquets nwa akụkọ akụkọ na -Ndụ mmekọrịta
N'okpuru nwoke ukwu ọ bụla, e nwere nnukwu nwanyị, ma ọ bụ ya mere okwu ahụ na-aga. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere ihe ịga nke ọma na FC Barcelona onye na-agba chaa chaa, e nwere egwuregwu ma ọ bụ enyi nwanyị mara mma dị ka a hụrụ aha Elena Galera Moron (nke gosipụtara ịhụnanya nke ndụ ya n'okpuru).
Dị ka n'oge ederede, Sergio Busquets dị ugbu aly onye na-alụghị di ma ọ bụ nwunye n'ihi ihe ụfọdụ kpatara ya. Otú ọ dị, ya na enyi ya bụ Elena Galera Moron bụ onye ọ zutere na 2013 na ya na-enwe mmekọrịta dị ogologo. Mmekọrịta ha anọgidewo na-eto eto kemgbe ha zutere. Mgbe ndị òtù FC FC ndị ọzọ na-alụ di na nwunye, Sergio bụ onye nde mmadụ na 30 (oge ederede) jụrụ ịlụ di ma ọ bụ nwunye ma kpebie ịmalite ịmụ nwa.
N'ụbọchị 8th nke March 2016, Sergio na Elena nabatara nwa mbụ ha na nwa nwoke ha kpọrọ Enzo. N'okpuru ebe a, ntakiri Enzo na ndi nne na nna ya.
Oge pụrụ iche maka Sergio Busquets ezinụlọ bụ n'oge eme ememe trophy, oge mgbe Elina na Enzo sonyere Sergio na ndị fọdụrụ na FC Barcelona ezinụlọ ka mmiri ara ehi oge.
Ịga ezumike na nkịta ha mgbe oge ịgba chaa chaa ma ọ bụ njedebe nke oge a bụ ihe jikọrọ Sergio Busquets na ezinụlọ ya.
N'ikwu maka nkịta, ọ dị mkpa ịkọ na di na nwunye ahụ nwere plọp abụọ abụọ aha ya bụ Minnie na Lily ndị na-ese onyinyo.
Ị ga-achọpụta na otu n'ime nkịta n'elu nwere ụdị yiri nke ahụ dị na foto mbụ nke Sergio Busquets ezinụlọ. N'ụzọ bụ isi, ọ dị mma maka nkịta maka ndị egwuregwu FC FC. N'okpuru ebe a Lionel Messi ya na nkịta ya nke natara uto dị ịrịba ama n'etiti February na September 2016.
Na April 2018, Sergio na Elina gosipụtara na mgbasa ozi ọha na eze na ha na-atụ anya nwa nke abụọ.
Sergio Busquets nwa akụkọ akụkọ na -Eziokwu Ụdị
Eziokwu a na-ekpughe ihe banyere Sergio Busquets akụkọ ihe mere eme ezinụlọ nke nwere ike inwe ụfọdụ nsụgharị Arabic maka egbugbu egbugbu ya na aka ekpe ya. Sergio Busquets Arabic tattoo sụgharịa;
"Ihe maka gị, ndụ na mba m",
Ọ na-arara egbugbu ya nye nna nna ya nke ọhụụ, bụ onye ha abụọ nọ nso tupu ya anwụọ.
Sergio Busquets nwa akụkọ akụkọ na -Eziokwu nke Lanky
Na-ele anya nke ọma na foto dị n'okpuru ebe a, ọdịdị ahụ Sergio na-egosi ụfọdụ ndị Arabian. Mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ na-eche mgbe niile ebe Sergio Busquets na-enweta ike ya site n'ịtụle ya.
Na-agba bọl, Sergio Busquets 'ụkwụ na aka na-etinye aka mgbe nile. A na-ahụ nke a ka ọ na-enwe ike ikpuchi ala ihe ijuanya ngwa ngwa ma na-emegide ndị ọgba aghara nke bọl, na-eme ka ha kwụsị.
Ọ na-esiri ndị na-egwu egwuregwu ike ịghọta oge niile nnukwu aka Sergio na-egbochi ma ọ bụ na-egbochi ya.
Sergio Busquets nwa akụkọ akụkọ na -Kpuchie Obi
Sergio Busquets bụ ihe dị omimi na pitch nke egwu. Ọ na-eweta obi iru ala na nnukwu ihe nchekwa na ọnọdụ ya.
Ọ bụ n'ihi ikike ya inye nnukwu ihe mkpuchi na pitch na Carles Puyol nyere ya onye na-agba ịnyịnya football n'oge ọ lara ezumike nká.
N'enweghị obi abụọ ọ bụla, Sergio Busquets mehiere site na njedebe nke ndị otu ya. Ike Sergio ịgụ egwuregwu ahụ na-eme ka ọ dịrị ya mfe ime ihe efu. Ọ na-esiri ike ịchọta a dịka maka nchighari maka Spaniard.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ anyị Sergio Busquets Child akụkọ na akụkọ eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Ụmụaka Marco Asensio Akụkọ Nke Na-emeghe Ihe Ndị Na-emeghị Eme